Goota keenya, nutu isin dura dhabama malee isin nu dura hin dhabamtanii nu hoogganaa qabsoo teenya galmaan nu gahaa jedhee ummata irbuu isaaniif seene gananii eenyuun bulchuuf bacuma muummee ministeraa irra taa’uuf taa’aa hooqachuu akka jalqaban namaaf hin galu. Qabsoon sabaa kan geeggefaa turee fi geeggeeffamaa jiruuf nama tokkee barcuma Itophiyaa irratti baafachuuf akka hin ta’in fira dhiisii diinni keenyaas midhaagsee beeka. Gaaffii sabaa gaaffii nam-tokkeen deebisuuf yaaluun boba’aa irra ibidda buusuudha. Qawween onnee fi humna ummata dura dhaabbattu ta’uu hin dandeettu.
Dhimma dhuunfaa mata mataaf jecha dhimma ummata bal’aa danquun ykn dhiibuun yeroof kan milkaawu fakkaatus gara dhumaa fafa keessaa hin bahamne keessa of galchuu akka ta’e xuuxillootni TPLFis beekuu qabu. Ummata nagaya malee lola hin feene, jaalala malee jibbinsa hin jaalatne, guddina malee xiqqeenya hin feene dhiibanii ibidda gadoo hin dhaamne keessa buusuun nagaya naannichaa booressuuf haala aanjessuu akka ta’e taatota armaan dura ta’an irraa silaa baratamuu male.